Nhengo dzeZanu-PF dzoPumhana Huroyi paRufu rwaAmai Mahofa
Boka remadzimai eZanu-PF
Nhengo dzeZanu-Pf dzakapumhana huroyi parufu rwegurukota rinoona nezvedunhu reMasvingo Amai Shuvai Mahofa avo vakashaya nemusi weChitatu.
Kunetsana uku kwakaitika pamba pemufi kuRhodene muMasvingo uye kwange kuri pakati pevanonzi vari kuzvikwata zviviri zviri kunetsana mubato reZanu-PF zvinoti Team Lacoste neG40.
Zvikwata izvi zvinonzi zviri kurwira kuti ndiyani achatora chigaro chemutungamiri wenyika, vaRobert Mugabe, kana vasiya basa. Chikwata cheTeam Lacoste chinonzi chinotsigira mumwe wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa.
Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika VaSydney Sekeramai.
Mumwe akadzingwa parufu ari wechikwata cheG40, Amai Fiona Rickett, nhengo yeZanu-Pf kuZaka vanoti vakadzingwa pamwe chete nemumiriri weBikita South mudare reparamende VaJeppy Jaboon vachipumwa huroyi.
Amai Rickett vakaudza Studio 7 kuti: “Ini ndasvika panhamo navaJaboon, MP weBikita South na Minister Mzembi tikamhorosa vanhu ini ndichibva ndanogara mutende nevamwe asi kwapfuura nguva inoita 40 minutes, ndakaona umwe mu youth achiuya achinditora achiti ndiri kudiwa panze nevakuru saka ini ndakabuda panze ndichitomubvunza kuti kwakanaka here kwamunoti ndiri kudeedzwa nevakuru, akati kwakanaka.”
Vakaenda mberi vachiti, “Saka tichisvika pagedhe apa akati zvanzi ibvai pano, hamusikudiwa pano”. Vanotizve, "Apo pandakange ndavakubva, ndasangana nemukadzi anonzi Auxillia akati kwandiri ‘ini ndini tete vepano; ndini muridzi wepano, ndini muridzi wezvinhu pano apa. Iwewe watumwa nepoison kubva kuGushungo Holdings saka hatichagoni kudya chikafu chedu pano kana uripano.” Gushungo Holdings ikambani yemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe avo vanonzi vari kuchikwata cheG40.
Amai Rickett vanoti havana kuita nharo asi vakangoshevedza vamwe vavo vachibva vapinda mumota vakabva pamba apa.
Vanoti pavakati fambe fambe vakabva vafonera VaJaboon vakaudzwa kuti ivovo vaine vadzingwavo.
Vanotizve vakabva vafonera VaMzembi avo vakatiwo naivo vainge vatovevo kubva panhamo ipapo, vachitizve vamwe vakuru vebato ravo vakaita saVaChimedza naMai Makonese vakadzingwavo.
Amai Rickett vanoti vakanomhan'ara kupumhiwa uroyi kumapurisa emuMasvingo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata VaMzembi asi akadaira nharembozha yaVaJaboon achizviti mutyairi wemotokari yavo akati vainge vari kumapurisa vachimhan'ara nyaya yavo.
Hurukuro naAmai Fiona Rickett